Kudzorera mari Bank makadhi: nzira
yokuisira Vakawanda epurasitiki makadhi pamwe Sberbank vakanangana zvinoverengeka. Vazhinji vavo chokuita nokurasikirwa, kuba kana kuvadza kadhi rokubhengi. Chero dambudziko, kugadzirisa zvichabatsira kudzorera Sberbank kadhi. Sei muitiro? Sei zvose tanga? Uye ivai nechokwadi kuti vaudze kubhangi pamusoro kana nhamo chokuita kadhi?
Brief pfungwa yavaipora nzira
Kana chisipo, kuba kana kukuvara kadhi rako rokubhengi ndangariro dzenhema zvizere kadhi kupora. Sberbank anoita nzira maererano achangobuda mirayiro kwemutongo tsika. Zvichienderana kuitika rwezvemabhengi mitemo, imwe kupora pfungwa kunoreva vakarasika kana kukuvaradzwa kadhi reissue. Kana izvi zvaitika zviri kuramba uinacho kadhi nhoroondo uye uchatamisa nengaidzo mari itsva debit kana kadhi rokubhengi.
Chii chinoratidza kuti kuita?
Humwe urongwa hwezvekuita kunobva chikonzero iyo vakatora zvizere kupora kadhi (mari Bank - mumwe kupfuura mabhanga Russian kupa mabasa akafanana). Somuenzaniso, unofanira kuita nokukurumidza muzviitiko apo kadhi rako wakabiwa kana yakarasika. Muchiitiko chino, danho rako rokutanga kunofanira kuva akakiya rwezvemabhengi epurasitiki. Uye iwe unogona kuita rimwe anotevera nzira:
pachake (uchibatsirwa kure rwezvemabhengi);
panguva kushanyirwa kana runhare kubhangi;
nokutuma mumwe SMS shoko neshoko "kiya" kune pfupi nhamba 900.
Ngatione kuti kuzoita mumari Bank of kadhi kana vakarasika.
How kudzorerazve pashure kurasikirwa kadhi: kushanya kubhengi
Saka kana iwe rakawanikwa pamwe nokutya kurasikirwa kana kuba kadhi, chinhu chokutanga kukiya payo pane zvinotevera nzira. Asi kana chiri kadhi rako Sberbank yakapfigwa, unogona zvakachengeteka kuenda kubhengi webazi, apo iye akagamuchirwa ambotaurwa. Kuti aite izvi unoda pasipoti uye mashoko inotaridza zvikonzero reissue nemakadhi. Muchiitiko chino, kumirira nebhengi idzva sezvo mapurasitiki anogona kubva maminitsi 15 (kana uine pakarepo uye kushaya mepu) uye kusvika mazuva 10-14.
Kana uri anaro ari oga kadhi, kwebhuku idzva unofanira zvachose kuziviswa runhare kana SMS.
Nokuda mari akasara: zvokuita?
Dzimwe nguva zvinoitika kuti kadhi charasika kana zvakabiwa ndiyo ennaya uwandu. Muchiitiko ichi zvakakodzera, kutanga, kuti aite njodzi kadhi zvechizarira, uye chepiri kuti akumbire mumiririri rokubhengi mwero. Saka unogona kutsvaga kana kadhi rako vakarasika kana zvebhinya vasingagoni kuzvishandisa.
Zvinotevera kunyora mutsva chaikwo nokuda huripo nhoroondo pamusoro uwandu mari. Mushure kuziviswa kwako uye chivimbo chakasimba unokwanisa kuwana akakumbira mari kuburikidza mari chikwereti sangano. Zvisinei zvinokosha kuti kushivirira, nokuti kazhinji kwakadaro cheki anogona kunonoka kwemazuva 5-10. A shoma kupfuura nguva pachayo Zvinotora kadhi Dzosa. Mari vachafara iwe zvauri kupomerwa, asi chete ezvinhu kuti iwe usaedza kubiridzira kubhengi mumiririri.
Zvinoita arayire kadhi idzva pamusoro paIndaneti?
Apo, mushure kuba kana kurasikirwa akare mari Bank kadhi yavharwa, paIndaneti unogona nguva dzose kurayira itsva. Kuti aite izvi, danda muruoko rwako "My Account" mobile kana paIndaneti rwezvemabhengi uye kuita zvinotevera matanho:
Sarudza Muterere chacho "Maps" uye kuenda peji itsva.
Click on Tab "Card apiwa issuance".
Zadza fomu (inopinda kuonana details, chikonzero kurapwa, mamwe mashoko nezvako).
Sarudza zvakakodzera dhipatimendi masangano zvemari uye kuzosimbisa chiito.
Zvisinei, nokuti mamwe mashoko, uye pakupedzisira kuwana mapurasitiki itsva uchiri kuuya kubhengi. Naizvozvo, pano zvaizova zvakakodzera kutaura kuti kadhi inogona akarayira paIndaneti. Asi vachiri kuda kuvapo kwako pachako. Panyaya iyi, iyo kuzoita mumari Bank kadhi achatora chaizvo zvakafanana mazuva sezvo riri mureza nzira uye reissue kadhi (10-14).
Zvokuita kana kadhi kukurukurirana kwacho?
Dzimwe mhosva matambudziko pamwechete kadhi kungava muridzi. Somuenzaniso, pane zviitiko kana rokushandisa anorasikirwa kana akanganwa PIN yavo. Uye chokwadi, zvose oedza yokusuma zvishoma yaizivikanwa mubatanidzwa kutungamirira kuti otomatiki Ndinoda kadhi. In izvi, hazvina hakurevi kuva apiwa kusunungurwa kana kudzorerwa Sberbank kadhi pashure nokukiya. Kudzokera kudzora nhoroondo zvakafanira chete kudana Hotline uye kupindura mibvunzo akaisa parutivi opareta.
Kana chavasina kana asara makadhi muna ATM
Hazvishamisi, uye kana muhoro, chikwereti kana debit kadhi panguva imwe ATM kukanganwika. Dzimwe nguva iye kungoti chavasina kana ATM "tsvikinyidza". Muchiitiko chino, iwe urege kunyange kukiya uye reissued kadhi. Enough kuonana kubhangi kuti vatengi kana kambani mubasa basa ATMs uye zviteshi.
Kazhinji, nokudyidzana runhare nhamba dzawanikwa chikwata. Panewo chaiyo nhamba akatumirwa midziyo. Kana iwe uchava akabvunza kuti zita uye Kero chitoro kana zvimwe kutosvika sale, uko ATM. Kunyange nyore ndozvazvakaita kana midziyo kubhengi iri zvakananga chikwereti mapenzi. Paizova zvakakwana kushevedzera kubatsirwa vamiririri kubhengi.
Kana kadhi kwave kukanganwika nemi panguva imwe ATM, kutanga unofanira kuva nechokwadi kuti kiya. Zvino unogona kudzokera Unit, iro kare yakasiyiwa kubhengi epurasitiki. Next, dzokorora yose nzira nokuudza kubhengi kuziva nhoroondo mwero uye kukumbira unblocking. Unogona kushandisa kadhi. Kana kadhi kubva ATM haana, enda kubhengi uye kuti fomu kuti kunenge issuance kwako kadhi rokubhengi.
Recovery Card (mari Bank): mutengo
Pasinei zvose zvakanakira makadhi apiwa nyaya, basa rine zvinokosha drawback: kuwana makadhi chikwereti mutsva - iri akaripa muitiro. mutengo wayo kunobva akasiyana-makadhi. Paavhareji, reissue kadhi une kubhadhara rubles 150 chete.
Kana paine zvinofanira reissued kadhi?
Kurayira kadhi idzva kunge mune Pakadaro, kana iwe kushandura kuonana yako kana zvemunhu. Somuenzaniso, zita uye kero dzokugara. Panguva iyoyowo, unogona kushanyira chero bazi tsika zvemari. Zvisinei, kana kadhi kwave kugamuchirwa chete ichangopfuura (somuenzaniso, kana kunyora zita kana mazita kwaiva kukanganisa), ipapo kwayo kunenge kusunungurwa zvinogoneka chete muhofisi, apo pakutanga wakabudiswa.
Ndinofanira Re-tikaisa kadhi kana kuchinja serura zvakabatana rwezvemabhengi?
Kana kushandura nhamba kuti zvakabatana Mobile rwezvemabhengi, hazvina zvakakodzera kuita kudaro. Zvaringana kunyora mashoko pamusoro sei chokukuvadza yapfuura uye batanidza itsva nhamba dzorunhare. Uye uchabva chete kuchinja nhamba pasuo paIndaneti rwezvemabhengi.
Types rwezvemabhengi enyika. Central Bank. Network ezvokutengeserana mabhanga
Kurasika kadhi (Sberbank), chii kutanga kuita?
Yakakunakira Liqpay maitiro: wongororo uye Benefits
Small kuverenga: cheki - ichi pachinzvimbo mari
Bank "Ugra": matambudziko. Bank "Ugra": wongororo
The mushonga "Zener". Kuongorora kunogona kubatsira
Chii pu nematehwe?
How kubika jamhu kubva maapuro pamwe nekinamoni. Recipes uye mazano
How kuti silencer nemaoko avo
Izvo nzvimbo dzakasununguka kune dzimwe nyika dzeMoscow: photo
Delicious oatmeal pamusoro pemvura: kuti tikundikane
The chikuru zvokudya foni dzidziso - kubatana zvose upenyu postulates
Ndinogona kuwana Ebola kuburikidza mabhanana nezvimwewo kupinza zvigadzirwa?
British zvipfeko pezvitsiga: ratings, zvinhu uye wongororo
Vangani vanorara muchipatara chekuberekwa mushure mokuberekwa uye chii chinovimba nacho?
Theodosius, Genoese nhare. zvinokwezva Feodosia